Iran: Hetsi-panoherana an’i Ahmadinejad any New York · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2009 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Français, বাংলা, English
Miandry ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad izay nandeha nankany New York, hanatrika ny fivoriam-ben'ny Firenena Mikambana ny hetsi-panoherana ny governemanta Iraniana sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mitranga any Iran. Manentana ny olona handray anjara amin'ity fihetsiketseham-panoherana ity ny fampitam-baovaon'olo-tsotra.
Mandra-piandry aloha dia nofoanan'ny New York Helmsley Hotel ny lanonana saiky notontosaina tamin'iny herinandro iny rehefa tsikaritra fa voalahatra hanatrika sy handray fitenenana Atoa Ahmadinejad.
Nikahang Kowsar, mpanao sariitatra sady mpamaham-bolongana koa dia nampiseho tamin'ny sariitatra iray nataony an'i Ahmadinejad katry-rami (fa tsy ataoko hoe Quat'mi) ao New York, manontany ny Tsangambaton'ny Fahafahana trano azo onenana. Toy izao ny vakin'ny soratra ao amin'ny sariitatra:
Ao amin'ny United4Iran, serasera tsy manohana olona fa mitolona ho amin'ny fampanajana ny zon'olombelona sy maha-olona ao Iran no hamakiantsika fa:
Kaaveh Aahangar ao amin'ny Iranian.com no manazava fa tsy fandaniam-potoana tsy akory ny fanoherana an'i Ahmadinejad ao New York :